HUSH BASSET IMBWA INOBEREKA RUZIVO NEMIFANANIDZO - IMBWA
Hush Basset Imbwa Inobereka Ruzivo neMifananidzo
Basset Hound / Cocker Spaniel yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
Mr. Bojangles iyo Hush Basset (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa)
Hush Basset haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Basset Hound uye iyo Cocker Spaniel . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese muchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Cocker Basset
'Aya ndiwo edu eBasset / Cocker Spaniel echikadzi echikadzi anoratidzwa pano pazera ramakore gumi nematanhatu. Ivo vemarara. Norma Jean mutema uye munyoro) uye Lucy ndarama. '
'Idzi imbwa mhuka dzakapfava uye dzine rudo dzati tambove nadzo. Ivo vakavimbika zvakanyanya uye vanogara vachitarisa kufadza. Vakanga vari zvimwe inoparadza uye yakaoma sembwanana vanotyisa vanotsenga . Nekudaro, ini ndinotenda kuti chikamu chikuru chenyaya yacho ndechekuti takavawana sevanhu vairasa marara uye ini ndaive lousy murairidzi. Mukati memakore mashoma, vakagara zvakanaka kwazvo uye vakaita zvakanaka nekuteerera kudzidziswa. Kushaya simba kwaNorma Jean kwaigara kuri magaba emarara.
'Imbwa dzese dzaifarira kuva nevanhu. Vakakura vane vana 3 uye havana kana kumbobvira varuma munhu. Vakafarira kurara muzuva uye kuenda kunofamba kana anomhanya musango, asi haasati ambotamba zvakanyanya kana kunakidza. Nguo dzavo dzaive dzakasiyana zvachose. Iyo imbwa nhema uye yakasviba yaive nehushe uye ipfupi inopenya bhachi. Lucy aive nevhudzi refu, gobvu (she sheds).
'Vakagara vaine hutano kunze kwevamwe arthritis . Ivo vane misana mirefu uye Lucy anoda mishonga ikozvino yekurwadziwa. Lucy ava ega manje. Akave akafara chaizvo kwemwedzi gumi yapfuura kubva pakafa mukadzi wake. Muchokwadi, iye anotonyanya rudo. Iyo imbwa yakanaka uye inofara yekare kune 17. '
'Elvis, Hush Basset wedu ane mwedzi minomwe ekuberekwa ndiyo imbwa yakanakisa, inotamba, ine rudo munyika ...'
Luna Hush Basset puppy pamasvondo gumi ekuberekwa- 'Akawana nzvimbo yezuva papatio ndokumira pikicha! Akasviba aine diki jena jena pamhino yake uye chipfuva chena uye akanaka chose! '
boston terrier cocker spaniel musanganiswa
Lottie iyo Hush Basset (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana pamasvondo masere ndeyemboro uye chena parti, yakaberekwa neDakota Winds.
Mudiki, ane mashanu-vhiki Hush Basset (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakarerwa neDakota Winds.
Hadhi, Hush Basset ane mavhiki mashanu (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakafudzwa neDakota Winds.
Libby, Hush Basset ane mavhiki mashanu (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakaberekwa neDakota Winds.
Mwedzi mishanu wekuAmerica anodheerera
Layla, ane mavhiki mashanu Hush Basset (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakarerwa neDakota Winds.
Hush Basset-yevhiki-mbiri (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakafudzwa neDakota Winds.
Mavhiki maviri Hush Basset (Basset Hound / Cocker Spaniel musanganiswa) mbwanana, yakafudzwa neDakota Winds.
Chinyorwa cheBasset Hound Sanganisa Mbeu Dzakabereka
Chinyorwa cheCocker Spaniel Sanganisa Inobereka Imbwa
10 vhiki yekare yero lab puppy
nzombe terrier uye gomba nzombe musanganiswa
bichon frize 1 yegore
jack russell chihuahua sanganisa mifananidzo